musha / Trading / Forex Tools / Currencies Forecast Poll
The Forecast Poll ishoko rinoshandiswa rinojekesa pedyo nekusvika kwemazuva mashoma matanho anotarisirwa kubva kune avo vanotungamira mumakambani ekuongorora.
Iko mari yekuongorora mafungiro inouya nemakore mashanu ehupfumi yakabatana neye gumi huru yeFX currency pairs. Iko kuongororwa kunoitwa Chishanu chega uye yakabudiswa pa15: 00 GMT. Tsvakurudzo inobudiswa muhupenyu hwose: vhiki imwe, mwedzi umwe, nechechina uye inosanganisira muvhareji mutengo panguva imwe neimwe. Iyi sarudzo inogona kuteverwa nevatengesi, vatengesi vemisika uye vanotungamirira zvidzidzo.
Ne widget iyi, vatengi vedu vanogona kuwana chinhu chinoshamisa. Icho chiratidzo chekunzwa chinoratidzira nyanzvi dzakasarudzwa 'pedyo nepakati pemazuva uye mafungiro uye kuverenga maitiro. Hazvifananidzi kutorwa sechiratidzo kana sechinangwa chekupedzisira, asi sechitsinhanho chekushandura 'mapeji ekupisa kwepfungwa uye zvinotarisirwa zviri kuenda.
Hapana chegi mune data; izvo zvifananidza zvakanyonganiswa uye zvino pakarepo yakasunungurwa, sechiratidzo haina kuvhara, hapana kunonoka. Sezvo zvakadaro izvi chinhu chakakosha zvikuru kana ichibatanidzwa nehuchenjeri, kana hukuru hwekutsvaga data.
Izvi zvinotaridzirwa nezvehupfumi hunobudisa dambudziko rekuita, zvichibva kune imwe mienzaniso yevatendi makumi maviri kusvika mashanu kusvika kune makumi mashanu vatungamiri vekutengesa mabhizimisi, pamusoro pemakore mashanu ewindo.
Vatengesi vanoratidza maitiro akafanana nemafambiro evanhu mundima dzakawanda; Nenzira yekuti chinangwa ndechekutevera boka revanhu mumisika. Mafungiro ekunzwa anogona, zvisinei, anokurudzira kugadzirisa pfungwa. Kushandisa chidziro chevatengi kunogona kuona mafungiro okunyanyisa uye saka usapinda mumusoro wepfungwa.
Ichi chishandiso chinowanikwa kuburikidza nevatengesi vevatengesi Hub yeFXCC.